अपर कर्णालीको परियोजना कार्यालयमा बम विस्पोट, क्षति विवरणसहित – On Khabar
June 8, 2019 onkhabarComment(0)
अनखबर / जेठ २५ गते
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाकाे सम्पर्क कार्यालयमा बम विस्फोट भएको छ ।
अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका-३ भैरवस्थानमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाकाे असाराघाटकाे सम्पर्क कार्यालयमा शनिबार बिहान ४ बजे प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको प्रहरीले बताएको छ ।
माथिल्लो जलविद्युत परियोजना राष्ट्रघाती सम्झौता भएको र त्यसलाई राेक्नुपर्ने जनस्तरबाट बारम्बार अावाजहरु पनि उठ्दै अाइरहेकाे छ ।
उक्त परियोजनाकाे सम्पर्क कार्यालयमा कस्ले ध्वस्त गराएकाे हो भन्ने एकिन जानकारी भएको छैन ।
नेपालका महत्त्वपूर्ण विभिन्न नदीहरु देशकाे अहितमा भारतलाई सुम्पिएकाे भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत विभिन्न पार्टीले सम्झौता भएदेखि नै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै अाइरहेका छन् ।
November 21, 2018 November 21, 2018 onkhabar
Spread the love काठमाडौं, मंसिर ६ । जनयुद्धका घाइते कुलप्रसदा भट्टराई ‘कुसुम’ ले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै अगाडि विष सेवन गरेका छन् । गृहमन्त्री थापालाई भेट्न बुधबार गृहमन्त्रालयमै पुगेका कुसुमले दिउँसो ३ बजेतिर विष सेवन गरेका हुन् । कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ स्थायी घर भएका कुसमको शरीरका विभिन्न भागमा गोली र छर्रा समेत रहेका छन् । उनीलाई […]
Spread the love सरकारी कर्मचारी होसियार, विप्लवको कारबाहीमा परिएला ! अनखबर संवाददाता पुस ८, मुगु मुगु : मुगुमा सरकारी योजनामा अनियमितता गर्दै आएका महेष कठायतलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आइतबार कालोमोसो दलेर कारबाही गरेको छ । अहिले पनि हरेक योजनाको १० प्रतिशतको दरले असुल्दै आएको थाहा पाएपछि निजमाथि सदरमुकाम गमगढीमा कालोमोसो दलि जनकारबाही गरेको नेकपाले जनाएको छ । […]
कहिले हेर्न पाईएला काठमाडौंमा २२ तले धरहरा ? ४ बर्षपछि पुननिर्माणको शिलन्यास !
Spread the love अनखबर पुस १२, २०७५ काठमाडौं–२०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले भत्किएको धरहरा पुनर्निर्माणको काम विहीबारबाट औपचारिक रुपमा शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विहान ११ बजे धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन् । भूकम्पले भत्किएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास भएको हो । भूकम्पले भत्किएको धरहरालाई ‘भुइँचालो स्मारक’ बनाइने […]